Nepal Mamila | गोरखामा के भनेकी थिइन् झाँक्रीले ? - Nepal Mamila गोरखामा के भनेकी थिइन् झाँक्रीले ? - Nepal Mamila
गोरखामा के भनेकी थिइन् झाँक्रीले ?
काठमाडौं- राज्य विरुद्धको कसुरमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले बिहीबार दिउँसो गिरफ्तार गरेको छ।
झाँक्रीले केही समयअघि गोरखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जोडेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो। तर, उनले पदको लिंग नहुने र सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको आलोचना गर्न पाइने बताउने गरेकी थिइन्। प्रहरीले भने सोही अभिव्यक्तिका लागि सोधपुछ गर्न बिहीबार महानगरीय अपराध महाशाखामा उपस्थित हुन भनिएको थियो।
बिहीबार बिहान प्रहरी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न उनकै निवास पुगेको थियो। तर, प्रहरीले पक्राउ पूर्जी नलगेका कारण झाँक्रीले गिरफ्तारी दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।
प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा ५८ को कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेको पूर्जी थमाएको थियो। मुलुकी फौजधारी अपराध संहिताको उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने व्यवस्था रहेको छ। यसो गरिए सात वर्ष कैद र सत्तरी हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यस्तो छ दफा ५८
राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुनेः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘संसद’ भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिमको संघीय संसद र प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका–संसदलाई समेत जनाउँछ।
झाँक्री गिरफ्तारीको कारण केही दिनअघि गोरखामा उनले गरेको सम्बोधन हो। जसमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। जसको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको थियो।
के बोलेकी थिइन्, झाँक्रीले?
माघ १६ गते नेकपा गोरखाको सिरानचोक गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिका र उनको उदयलाई समेत जोडेर तत्कालीन एमालेको सांस्कृतिक अभ्यास त्रुटीपूर्ण भएको औंल्याएकी थिइन्। उनका शब्द यस्ता थिए-
राष्ट्रपतिको कुरा त के गर्नु? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ, अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै। म बडामहारानीलाई यहीँ गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु- निर्वाचनको तयारीका लागि कारगेट छाडेर, सुख सुविधा, ऐस आराम, शीतल निवास छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चावहिल कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। र, नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो, त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्। तपाईंसँग म पनि अलि भारी हुन्छ होला। यही रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँछौं र हराउँछौं। तपाईंका लागि म पनि भारी हुन सक्छु।
त्यसकारण बडामहारानीले हामीले प्राप्त गरेका, हामीले संघर्ष गरेर ल्याएका अधिकारहरुमाथि गिद्देदृष्टि लगाएर एउटा गुटको, खास गुटको मान्छेको तुष्टि फेर्नका लागि गरिएका असंवैधानिक कदम किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
त्यसकारण यो नेकपा एमालेले २०५० सालमा गरेको भुल थियो। यहाँ अन्यथा नहोस्। तमाम दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, शहीद परिवार हुनुहुन्छ। यहाँहरुलाई भन्न खोजेको होइन। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो साडी लाएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो, नेकपा एमालेले। त्यसको प्रतिउत्पादन हो, विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चीरहरण गर्ने कारण बनेको छ। त्यसकारण संस्कृति पनि सही हुनुपर्ने रहेछ। धरानमा हामीले चुनाव हार्नुको कारण पनि त्यही हो। धरानमा मेयर बिरामी भएर बित्नुभयो। मेयरका श्रीमतीलाई टिकट नदिए बापत भनेर भोट हालेनन्। र, कांग्रेसले जित्यो। सेन्टिमेन्टको, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको राजनीति पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीति विचारधाराकै गर्नुपर्दोरहेछ। त्यसकारण जब विचार सिद्धिन्छ। कपाल देखाएर, नाक देखाएर, छाला देखाएर, लुगा देखाएर जब राजनीति गरिन्छ नि, पुग्ने त्यहीँ हो। त्यसबाट आउने चिज पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले गलत काम गरेकै कारणले, नारायणकाजी कमरेडलाई पनि थाहा छ, दोस्रो पटक विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति नबनाऔं भनेर सचिवालयका नेताहरुलाई, सबैको घरमा देउसी खेल्न गएको हामी। उहाँहरुले कानमा तेल हाल्नुभयो। त्यतिञ्जेलसम्म उहाँहरुको विद्या भण्डारीले केही बिगारेको थिएन। हाम्रो पनि त बिगारेको थिएन। अब थाहा पाउनुभयो। त्यसकारण उहाँहरुभन्दा हामी नै दूरदर्शी थियौं भन्ने त प्रमाणित भयो नि! सबै नेता कमरेडकोमा गएको हामी। एउटा सेरोमोनियल पदमा मान्छे दोहोर्‍याइ/तेहर्‍याइ किन राख्ने?